မောင်စိုးချိန် | MoeMaKa Burmese News & Media
>My Acedamy Sein - From MRTV to KRTV -
>On the3Year Passing of U Tin Moe - some art works shared
>artist Yar Huu Lar passes away
>Letters from Michigan - 83
Posts Tagged ‘ မောင်စိုးချိန် ’
မောင်စိုးချိန် ● လှေခါးမဲ့နင်းပြားမြေပြင် (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ခြေနှစ်ချောင်း လက်နှစ်ဖက် ကူးခတ်ရုန်းကန်ဖို့အတွက်။ ကြောကုန်း ကုန်ရုန်းထမ်းပိုးဖို့အတွက်။ ဦးခေါင်း ဝန်ထုတ်လေးသိတ် အံကြိတ်ရွက်ဖို့။ ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် အရင်းအနှီး အရင်းအမြစ် ကိုယ်...
မောင်စိုးချိန် ● ကြည်အေး… သို့မဟုတ် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၈၊ ၂ဝ၁၇ (က) “ဆရာရေ ဆရာမကြီးဒေါ်ကြည်အေးဆုံးရှာပြီ။ အခုပဲ facebook မှာ သူကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းကို ဥက္ကာနဲ့အတူဖတ်နေ ကြတာ” ကိုဥက္ကာက...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁၄) (၂၀၁၅ မတ်လ ၆ ၊ လက်ပတန်းဈေးအနီး သပိတ်တိုက်ပွဲ) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၅ ခွပ်ဒေါင်းဟာ တခါတခါ ကြိုးကြာ တခါတခါ...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁၂)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁၂) (လေးပွင့်ဆိုင်မှသည် တန်ပြန်သပိတ်သို့) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၅ လေးပွင့်ဆိုင် စကားဝိုင်းက ထွက်ကျလာတဲ့ စကားလုံး အချိုမြဆုံး ချိုမြ၀ိုင်းစက် နောက်တော့ လေးဒေါင့်...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁၁)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁၁) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဗမာပြည် ယမ်းငွေ့သုန်မှုန်နေတဲ့ တိုင်းပြည် တိုက်ပွဲသံတွေ အုံကြွပေါက်ကွဲ အမြဲဝတ်ဆင်ထားတဲ့ တိုင်းပြည် စစ်တပ်သေနတ်ရှိတဲ့ အရိုင်းအစိုင်း...
မောင်စိုးချိန် ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁၀) (၂၀၁၅ မတ် ၅ – ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမရှေ့) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၅ လက်သီးဆုတ်များ လက်ချောင်း လက်မောင်း လက်ရုန်းအပေါင်း ကောင်းကင်ထိုးခွဲ...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၉)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၉) (၂၀၁၅ မတ် ၃ လက်ပံတန်း) (မိုးမခ) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၅ တံလျှပ်ထဆဲ သဲကန္တာရမှာ …. လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပန်းတွေပွင့်ဖို့ ဥယျာဉ်သစ်...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၈) (မိုးမခ) မေ ၂၆၊ ၂၀၁၅ • သေမင်း (က) ဖိနှိပ်အုပ်စိုး ကိုယ်ကျိုး ကိုးကွယ်ရာ အာဏါ အဓွန့်ရှည်ကြာရေး လူထုသွေး ချွေး...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၇) (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ တိုင်းပြည်ခြေလှမ်း လမ်းပေါ်မှာ ကောက်ကျစ် အဆိပ်ပြင်းက အဆိပ်ပြင်း ကောက်ကျစ်ပြန်လုပ် ကိုယ်ကျိုးသမားက ကိုယ်ကျိုး အာဏာပြန်လုပ်တယ်။ မိစ္ဆာဆူးညှောင့်က...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၆)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၆) (မိုးမခ) မေ ၉၊ ၂၀၁၅ လမ်းပေါ်က သပိတ်တပ်ချီတက်သံတွေ မိုးလုံး လျှံကျ ရိုက်ခတ်နိုးထစေခဲ့ စစ်ကျွန်လူထု နိုးကြွလာခဲ့ကြလေရဲ့။ ကျေးလက်မြို့ပြ အိမ်ခြေ ရပ်ကွက်တွေက...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၅) (မိုးမခ) မေ ၅၊ ၂၀၁၅ ကြင်နာသနားခြင်း ရင်တွင်းက စီးဆင်းလာတယ်။ မိစ္ဆာရိုင်း သမိုင်း တခေတ် ကျားဖြစ်တယ် သပိတ်သား သမင်ကို...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၄)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၄) (မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂၀၁၅ လာနေပြီ နည်းဟောင်းအတိုင်းပဲ သပိတ်စစ်ကြောင်းထဲ ထိုးခွဲဘို့ ထောက်လှမ်းရေးသူလျှို လိုသလို ထည့်ထားခဲ့တယ်။ တ . က...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၃)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၃) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၅ အဆန်းသစ်ဆုံး အလှိုက်လှဲဆုံး ထုဆစ်ခဲ့ လွတ်လပ်မှု အမှတ်အသား ကျောင်းသား ပန်းပုရုပ်ထု။ တန်ဘိုးကြီးမားလှ လူထုချစ်မေတ္တာ စိန်နဲ့...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၂)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၂) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၅ သမိုင်းခေတ် တခေတ်ပြီး တခေတ်ပြောင်း အဟောင်းဖျက်သိမ်းခြင်းအစ ကျောင်းသားသပိတ်က။ ကျောင်းသားသပိတ် ခေတ်ရဲ့ အရိပ် ခေတ်ရဲ့...
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁)
မောင်စိုးချိန် – ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၁) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၅ချွတ်ခြုံကျမှုက အရာရာ ဦးစီးသယ်ဆောင်နေတဲ့ခေတ် စစ်ခေတ်။ တကိုယ်ကောင်းစိတ် သစ်တောအုပ်တွေလို အပြိုင်းအရိုင်း စိမ်းလန်းနေတဲ့ ခေတ်။ သစ္စာတရားကိုကွင်းရှောင် သူရဲဘောကြောင်တဲ့...
မောင်စိုးချိန် – ကြေကွဲ ငိုကြွေးသံ ဟာသများ
မောင်စိုးချိန် – ကြေကွဲ ငိုကြွေးသံ ဟာသများ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၅ ဟာသ ပညာရှင် ချာလီ ချက်ပလင် မစ္စတာဘင်း သူတို့က ဆရာရင်းတွေ ဒါပေမဲ့ ဆရာထက် လက်စောင်းထက်တဲ့...
မောင်စိုးချိန် – အင်အားကြီးမား ကျိန်စာ ပလူကောင်များ
မောင်စိုးချိန် – အင်အားကြီးမား ကျိန်စာ ပလူကောင်များ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၅ (လက်ပံတောင်တောင် မြေယာတိုက်ပွဲထဲမှာ ကျဆုံးသွားသူ လယ်သူမကြီး ဒေါ်ခင်ဝင်းနှင့် ဆက်လက်ချီတက်ဆဲ လူထု အတွက် ဦးညွှတ်ခြင်းကဗျာ) မြေယာ...
မောင်စိုးချိန် – လယ်ကွက် သွေးစက်မှ တဆင့်
မောင်စိုးချိန် – လယ်ကွက် သွေးစက်မှ တဆင့် (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၁၅ photo source : yahoo တလက်မ မြေတကွက် သွေးတစက် အသက်တချောင်း။မြေ လက်မပေါင်း ကုဋေ...